Waaqeffannaan Beekumsaa fi Hayyama Seeraa Mootummaa Norwey Argate!
(Madda Oduu ABO/MOA/Bargan/ Amajjii 25,2009) Amantiin Waaqeffannaa biyya Noorwey keessatti beekumsaa fi hayyama qaama seerummaa argatee galmaa’uun tarree amantiilee addunyaa kanaa ta’uun galmeeffamuun isaa beekame.
Waaqeffattoti biyya Norway fi biyyoota adda addaa jiraatan amantii Waaqeffannaa deebisanii dagaagsuuf gurmaa’anii hojii jajjabduu karaa sarara paltalk fi quunnamtii garagaraa walitti dhufanii hojjachaa turaniin, Waajjirri dhimma kana hordofuu fi hayyama kennu Muddee 2, bara 2008 Waaqeffannaan amantii Oromoo jedhee galmeessuu isaa waraqaa ragaa20koree GWA biyya Noorweyiif kennee jira.
Akka kanaan Waajjirri kun Amantiin Waaqeffannaa Amajjii 17,2009 irraa kaasee tarree amantiilee biyya Norway keessatti beekamanii fi seeraan galmaa’an waliin qixxeetti galmeeffamuu fi waajjira Mooticha biyyattii biratti beekamuu isaa xalayaa mirkaneessu ibsa gammachiisaa waliin koree Gumii Waaqeffannaa Addunyaa kan biyya Noorweyiif kennee jira.
Akka xalayaan hayyamaa kun mirkaneessitutti, Amajjii17, 2009 irraa eegalee, koreen Gumii Waaqeffannaa Addunyaa damee Norway miseensota isaa galmeessisuun hojii amanticha barsiisuufi guddisuu raawwachuu danda’a.
Guleen Adulaa Duraa Gumii Waaqeffattoota Addnyaa dhimma kanarratti dhaamsi darbe akka hubachiisutti,”warri Waaqeffannaa hordofnu, amantiin Waaqeffannaa saba keenya ummata Oromoo fi Saba Kuush hunda biratti maqaa qofaan osoo hin taane, dalagaan ykn mul’inaan akka jiraatuuf irratti hojjechuuf maqaa GWA jedhuun gurmoofne. Gurmuu kanaan Waaqeffannaa sirnaan barachuu, barsiisuu fi hawaasa addunyaa beeksisuu qofa osoo hin taane, aadaa, afaanii fi seenaa saba keenyaa ittiin guddisuuf nu gargaara jennee amanna. Akka amantiitti ammoo Waaqa tokkicha, kan morkaa fi hiriyaa hin qabnetti amanuu fi isaan buluudha,” jedhanii jiru.